Tilmaamaha 6 Si Loogu Adkeysto Qabowga Guriga Si dabiici Ah - Hagaajinta Caafimaadkaaga - TELES RELAY
ACCUEIL » Daawooyinka dabiiciga ah »Talooyinka 6 ee looga gudbi karo hargabka guriga si dabiici ah - Hagaajinta caafimaadkaaga
Maqaalka, waxaan kugula wadaageynaa talooyinka 6 si aad uga adkaato hargabyada guriga si dabiici ah. Waxaan kaa caawin karnaa kahortaga cuduradan fayraska leh xoogaa talo bixin ah, dawooyin guriga ah iyo, ugu muhiimsan, nasasho iyo soo kabasho.
Cudurka marinka sare ee neefsashada ayaa sababa xanuun badan iyo raaxo daro maalmahan. Si kastaba ha noqotee, talooyinkan ayaa naga caawin doona yaree astaamaha oo dardar gal habka bogsashada.
Talooyinka 6 si looga adkaado qabowga guriga si dabiici ah
1. Ha qaadan antibiyootig
Marka hore, waa inaanu tilmaano in hargab uu yahay infekshan fayras ah iyo Sidaa darteed waa wax aan faa'iido lahayn oo xitaa khatar ah in la qaato antibiotics. Waxaa loogu talagalay daaweynta caabuqyada bakteeriyada.
Calaamadaha ugu weyn ee hargabku waa bararka marinka sare ee neefsashada. Tani waxay saameyn ku yeelan kartaa sanka, cunaha, dhuunta, xiidmaha, sanka iyo xitaa dhegaha. Sidaa darteed, dawooyinka ama dawooyinka aan qaadno waxay diirada saari doonaan yareynta raaxo-darrooyinkaas.
Sidoo kale akhri: Tilmaamaha 5 ee nidaamka difaaca xoog leh oo sharaf leh
2. Maxay yihiin dawooyinka waxtarka leh?
Daaweynta dabiiciga ah qaarkood waxay naga caawin karaan inaan ka adkaano hargabka guriga. Waxaa jira cuntooyinka daawada kuwaas oo lagu kala duwan yahay ay antiviral, astaamaha ama milkiyeyaasha milkiileyaasha oo aad waxtar u yeelan kara:
sinjibiil : dawaynta sugida oo waliba jirka siisa kuleyl aad u badan si looga caawiyo in looga takhaluso cudurka
toon : toonta cayriin waa dawayn xoog leh oo lagaga soo horjeedo virus
Caanlon ee Ceylon : udgoonkani waa mid dawada laga helo, anti-barar iyo antiviral
liin : waxay yareysaa ciriiriga
Basbaas Cayenne : inkasta oo ay dawo u tahay mid dhadhan fiican leh, oo ay aad u yar yihiin, waxay xoojisaa nidaamka difaaca waxayna la dagaallameysaa ciriiriga
Shinni malab : wuxuu yareeyaa qufaca wuxuuna fududeeyaa eryada xabka
likorays : waxay leedahay soo-saaris, antiitussive, antiviral iyo emulsifying guryaha (ilaalinta xuubka xuubka)
Si looga adkaado hargabyada guriga, waa lagama maarmaan in la wanaagsanaado biyo cabaan. Waxaa intaa dheer, taladan fudud waxay naga caawin doontaa khafiifinta xabka sidaa darteedna loo yareeyo ciriiriga.
Marka lagu daro biyo, waxaan kaloo qaadan karnaa infus dhirta dhirta daawooyinka kor lagu soo sheegay. Waxaan sidoo kale u dooran karnaa maraqa guryaha lagu sameeyo iyo miraha miraha iyo khudradda.
4. Ka dhig marinnada hawadu qoyan tahay
Tilmaanta kale ee looga gudbi karo hargabka guriga waa in hawo mareenka hawada qoyan yahay. Sidan, Waxaan ka hortagnaa, waxyaabo kale, qufac qalalan iyo dhuun xanuun.
Hal hab oo tan loo sameeyo waa in la isticmaalo a Hawo-mareen hawada ku jirta. Qaar ayaa xitaa na siiya suurtogalnimada inaan ku darno saliidaha lagama maarmaanka ah, taas oo markaa aan dooran karno nuxurka eucalyptus, liin, geed ama liin macaan.
Ikhtiyaar kale ayaa noqon lahayd inaad u neefsato hawo-mareennada si ay si toos ah u furaan, u caddeeyaan ugana qoyaan. Thanks to uumiga dabeysha, tusaale ahaan, waxaan heli karnaa deg deg deg deg ah.
Sidoo kale akhri: Aromatherapy, waa maxay?
5. Naso si aad uga adkaato hargabka guriga
Qabowga ayaa sidoo kale calaamad u ah jirkeena, kaas oo uu naga codsanayo inaan nasiino. Hargabku wuxuu u gudbi karaa iyada oo aan cillad lahayn iyada oo ah geedi socod muujinaya jirka, haddii aad raacdo talooyinkaan.
Haddii aan ku qasbanaano in aan sii wadno shaqada ama aan sii wadno howlaheena caadiga ah, waxa kaliya ee aan heli doonno waa in astaamaha ay sii xumeeyaan oo qabowgu sii dheeraado. Intaa waxaa dheer, waxaan qatar ugu jirnaa dhibaatooyinka silica.
Qaado dhawr maalmood naftaada. Diyaarso infus infusional, si fiican u dabool si aad uga fogaato isbeddelada heerkulka, oo naso inta jirkaagu u baahan yahay. Ka fogow ka bixida gurigaaga ama caado kasta oo sun ah.
6. Ma habboon tahay inaan la tasho dhakhtar?
Ugu dambeyntii, waa muhiim inaad takhtarka haddii:
Qofka hargabku waa bukaanka khatarta ugu jira sida carruurta, haweenka uurka leh, waayeelka ama dadka qaba cudur kasta
Neefsashada dhib badan ayaa naga haysata
Xabka candhuufta aan ku candhuufno wuxuu bedelaa midab mana sii caddaan karo
Waxaan ku dareemaynaa xanuun ama raaxo la'aan dhegaha
Xummadda ayaa ka weyn 39 °waxay socotaa in kabadan 4 maalmood ama dib u soo noqoshada ka dib marka la waayo.
Haddii aan lahayn astaamo kale oo aan ahayn hargab ama aan dareemno raaxo darro badan
Qufacu ma baaba'o maalmaha ama aad ayuu u xoog badan yahay
Tilmaamahaan fudud, waxaan ku garaaci karnaa hargabyada guriga anagoo u oggolaanaya jirkeenna inuu nasiyo. Cunnooyinka daawada iyo dawooyinka qaar ayaa naga caawin doona inaan cagaheena ku soo noqonno dhawr maalmood gudahood.
Talooyinka 5 si looga fogaado hargabka xilliga qaboobaha
Waxaa la sheegay in ay ka wanaagsan tahay in "laga hortago intii la daweyn lahaa". Xilliga jiilaalka, hargabku waa caadi, sidaa darteed waa inaan isku daynaa inaan ka hortagno. Read more »
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://amelioretasante.com/6-conseils-pour-vaincre-le-rhume-a-la-maison-de-maniere-naturelle/
Daawooyinka dabiiciga ah ee lagu Daaweeyo Xanuunka kaadiheysta ee Xanuunsan - Hagaajinta Caafimaadkaaga
Pas de Liverpool